Ity ny fanafihana DDoS izay nisy fiatraikany tamin'ny PlayStation Network omaly | Vaovao momba ny gadget
Ny IoT, amin'ny teny Espaniôla ho "The Internet of Things" no tena tompon'antoka tamin'ny fanafihana DDoS izay nandao ny PlayStation Network sy ireo rafitra Internet maro hafa tsy nisy serivisy omaly. Ary noho io fomba io no nanirian'ireo mpijirika hahita antsika fa mampidi-doza ny mampifandray ny zava-drehetra amin'ny internet, ary manokatra ny masontsika momba ny fiarovana kely ampiharin'ny orinasa amin'ity karazana rafitra ity. Manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana (Brian Krebs) no nanambara fa ity fanafihana DDoS ity dia natao tamin'ny alàlan'ny fitaovana mifandray tsy misy filaminana., noho io no nampiasan'izy ireo malware antsoina hoe Mirai.
Ireo no ankamaroan'ny fidirana an-tsokosoko nahatonga ny Twitter nihazakazaka nandritra ny ora roa omaly, ary koa ny rafi-dalao PlayStation Network sy ny rafitra fandoavam-bola toa ny PayPal. Tsy izy ireo ihany, ny hafa toa an'i Amazon, Spotify, Netflix ary Reddit nanatevin-daharana ny lisitra. Mitete hatrany amin'ny serivisy noho ny ireo mpizara azy ireo dia voadona tamin'ny alàlan'ny fitaovana IoT izay voan'ny virus malware voalaza etsy ambony. Hita fa tsy dia raisin'izy ireo ho zava-dehibe ny fiarovana anay raha ny momba ny IoT, ary tsy maintsy andraisana andraikitra.
Ny fanafihana dia vokarin'ny mpilalao horonantsary, fakantsary IP ary vokatra isan-karazany mitovy habe aminy, indrindra ireo novokarin'ny orinasa Xiong Mai Technologies, fiaviana sinoa. Noho io antony io dia tsy maintsy liana amin'ny fiarovana ny tambajotra ny mpampiasa, satria toa manolotra serivisy ho anay ny orinasa fa tsy ny lakileny. Amin'izany dia azontsika ampitahaina amin'ny fiara amidy amintsika tsy misy fehikibo na valizy, zavatra tsy takatry ny saina mihitsy amin'ny fotoana ahitantsika ny tenantsika. Ity dia fampitandremana voalohany fotsiny avy amin'ireo mpijirika, izay tsy isalasalana fa haverina amin'ny volana ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ity ny fanafihana DDoS izay nisy fiatraikany tamin'ny PlayStation Network, Twitter, PayPal ...
penta dia hoy izy:
Toy izany koa ve ny fanafihana? Tsy ho toa izao ve ny fanafihana nisy fiantraikany sa ity ny fanafihana misy vokany?
Mamaly an'i Pentha
Ny Huawei Mate 9 dia hanana vera miolakolaka amin'ny fakan'ny Samsung Galaxy Edge